सजिलो र मूल ढुङ्गाहरु संग 12 शिल्प | शिल्प सक्रिय
12 सजिलो र मूल ढुङ्गा संग शिल्प
इसाबेल कातालान | 02/05/2022 23:55 | अद्यावधिक गरियो 03/05/2022 01:01 | शिल्प र सामग्री, रिसाइकिलिंग
ढुङ्गाहरू शिल्पको लागि उत्कृष्ट वस्तु हो। यो सामग्री प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ, जसलाई विभिन्न प्रकारका प्रयोगहरू दिन सकिन्छ। तपाईलाई कति थाहा छ ढुङ्गा संग शिल्प के तिनीहरू गर्न सकिन्छ? धेरै!
तल तपाईले ढुङ्गाहरूसँग विभिन्न शिल्पहरूको सूची पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई आश्चर्यचकित गर्नेछ। सजावटी तत्वहरू, बोर्ड खेलहरू, गहनाहरू र अधिकबाट। के तपाइँ यी प्रस्तावहरूको साथ तपाइँको रचनात्मकता खोल्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ? तपाईं एक मात्र गर्न सक्नुहुन्न!
1 पत्थर क्याक्टस
2 DIY: बीच ढु stone्गा हार
3 ढुंगा र सेक्विनको साथ एडी सजावट
4 बिजुक्स: ढु stone्गा र मोतीको हार
5 Rock bookends, बनाउनको लागि द्रुत
6 फूल, ढु stones्गा र मैनबत्तीको साथ केन्द्रबिन्दु
7 DIY: ढु stones्गाको साथ डोमिनोज
8 सजिएको समुद्र तट ढु stones्गा
9 रंग संग सजावट ढु stones्गा
10 कसरी तपाइँको ढु stones्गा र सजाउने
11 पेन्ट पत्थर सजावट गर्न
12 रूखको लागि ढुङ्गाको घेरा
यदि तपाइँ घरको कोठामा ल्याएको रंगको लागि बिरुवाहरू मन पराउनुहुन्छ तर तपाइँसँग उनीहरूको हेरचाह गर्न धेरै समय छैन भने, यो पत्थर क्याक्टस यो समाधान हो। ढुङ्गाहरूसँगको सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा सुन्दर शिल्पहरू मध्ये एक जुन तपाईं आफ्नो घर वा बगैंचा सजाउन गर्न सक्नुहुन्छ।
घरका साना केटाकेटीसँग गर्ने रमाइलो शौक हो। एकातिर, तपाईं पार्कमा ढुङ्गाहरू खोज्न र रमाइलो पैदल यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईंले क्याक्टस बनाउनको लागि ढुङ्गाहरूलाई रङहरूमा चित्रित गर्ने धेरै मनोरञ्जनपूर्ण दिउँसोको आनन्द लिनुहुनेछ।
तपाईलाई के सामग्री चाहिन्छ? ढुङ्गा, अवश्य! तर एक भाँडो, माटो, एक ब्रश, एक्रिलिक रंग र मार्किंग कलम पनि।
यो शिल्प धेरै सजिलो छ। पोस्ट मा पत्थर क्याक्टस तपाईंसँग उत्कृष्ट देखाउनको लागि सबै चरणहरू सहितको एक सुपर जिज्ञासु भिडियो ट्यूटोरियल छ।
DIY: बीच ढु stone्गा हार
समुद्र तटको किनारमा धेरै सुन्दर ढुङ्गाहरू फेला पार्नु धेरै सामान्य छ, जुन तपाईं केन्द्रबिन्दु बनाउनको लागि सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हार बनाउनुहोस्। यो सबैभन्दा मौलिक ढु stone्गा शिल्पहरू मध्ये एक हो र तपाईंलाई यो गर्न धेरै सामग्रीहरू आवश्यक पर्दैन।
नतिजा राम्रो देखिन्छ विशेष गरी समुद्र तटको साथ तपाईले गर्मीको समयमा लगाउनु हुन्छ। पदबाट एक DIY: बीच ढु stone्गा हार यो एउटा उदाहरण हो तर यदि तपाईलाई बढी विवेकी हार मनपर्छ भने, म तपाईलाई सानो साइजको ढुङ्गा छनोट गर्न सल्लाह दिन्छु यदि तपाई हारलाई केन्द्रमा लिन चाहनुहुन्न भने।
सामग्रीको रूपमा तपाईंले धेरै थोरै चीजहरू जम्मा गर्नुपर्नेछ। केवल एक ढुङ्गा, राम्रो तार, रंग, स्ट्रिङ कटर र तार।
ढुंगा र सेक्विनको साथ एडी सजावट
अर्को रचनात्मक पत्थर शिल्प र तपाईले के गर्दा सबैभन्दा रमाइलो लाग्नुहुनेछ सेक्विन र ढुङ्गाको साथ अग्लो हिलको जुत्ताको जोडीलाई अनुकूलन गर्नु हो। यसले तपाइँलाई तपाइँको सबैभन्दा रचनात्मक पक्ष बाहिर ल्याउन र एकै समयमा पुरानो जुत्ताको त्यो जोडीलाई दोस्रो जीवन दिनेछ जुन तपाइँ धेरै मनपर्छ। तपाईं द्वारा बनाईएको एक अद्वितीय डिजाइन जसले तपाईंका साथीहरू बीच ध्यान आकर्षित गर्नेछ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै सजीलो! तपाईंले निम्न सामग्रीहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ: जुत्ताको एक जोडी, केही सजावटी ढुङ्गाहरू, केही सेक्विनहरू, गोंद, केही चिमटी र काठको स्टिक।
तपाईले पोस्टमा पछ्याउने प्रक्रिया देख्न सक्नुहुन्छ ढुंगा र सेक्विनको साथ एडी सजावट.
बिजुक्स: ढु stone्गा र मोतीको हार
ढुङ्गाहरु संग तपाईं विभिन्न शिल्प को एक धेरै तयार गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सुन्दर मोती र ढुङ्गाको हार जसको साथ आफ्नो पोशाक पूरा गर्न। पहिले तपाईले ढुङ्गाको हारको उदाहरण देख्न सक्नुहुन्थ्यो तर यस पटक तपाईले कम अनौपचारिक र धेरै सुरुचिपूर्ण शैलीको फरक मोडेल देख्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ ढुङ्गाहरु संग शिल्प मनपर्छ भने, तपाइँको हातहरु संग एक हार बनाउन को लागी तपाइँ गर्न सक्ने सबै भन्दा मनोरञ्जन र रमाइलो अनुभवहरु मध्ये एक हो। साथै, तिनीहरू सामान्यतया धेरै सस्तो छन्। त्यहाँ धेरै विशेष स्टोरहरू छन् जसले तपाईंलाई यी सुन्दर गहनाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू प्रस्ताव गर्दछ र तिनीहरूमध्ये केहीले यस प्रकारको शिल्पमा प्रगति गर्न कार्यशालाहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्।
पोस्ट मा बिजुक्स: ढु stone्गा र मोतीको हार तपाईं ढुङ्गा, मोती, धागो र मोती संग यस प्रकार को शिल्प बनाउन को लागी थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
Rock bookends, बनाउनको लागि द्रुत
के तपाईं किताबहरू प्रति भावुक हुनुहुन्छ र के तपाईंसँग घरमा ती सेल्फहरू छन्? तिनीहरूलाई व्यवस्थित राख्न र तिनीहरूलाई ठाउँबाट खस्नबाट रोक्नको लागि, यो तपाईंले गर्न सक्ने सबैभन्दा व्यावहारिक ढुङ्गा शिल्पहरू मध्ये एक हो। यो पनि धेरै सरल छ र यो गर्न को लागी तपाईलाई धेरै प्रयास लाग्दैन। तपाईंसँग केही खाली समय हुँदाको लागि उत्तम!
यो प्राप्त गर्न देहाती शैली शिल्प, तपाईंले निम्न सामग्रीहरू जम्मा गर्नुपर्नेछ: विभिन्न आकारका ढुङ्गाहरू, गत्ता र तातो सिलिकन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै महँगो केहि छैन। पोस्ट मा ढुङ्गाको पुस्तकहरू, तुरुन्तै गर्न को लागी तपाइँ एक पल मा यो शानदार bookend प्राप्त गर्न को लागी सबै चरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ।
फूल, ढु stones्गा र मैनबत्तीको साथ केन्द्रबिन्दु
राम्रो मौसमको साथ तपाईं घरको सजावटमा नयाँ हावा दिन चाहनुहुन्छ। यो प्यारा बारे कसरी केन्द्रबिन्दु बैठक कोठाको टेबुललाई जीवन्त बनाउन? परिणाम धेरै सुरुचिपूर्ण, रंगीन र प्रदर्शनी छ। यदि तपाईंसँग रात्रिभोजको लागि पाहुनाहरू छन् भने टाउको घुमाउन निश्चित छ।
तपाईलाई यो केन्द्रबिन्दु बनाउन के सामग्री चाहिन्छ? नोट लिनुहोस्! फूल र ढुङ्गा बनाउन काठ, ढुङ्गा, क्रेप पेपरबाट बनेको सानो ट्रे वा टोकरी। यो बनाउन को लागी सबै भन्दा सजिलो पत्थर शिल्प मध्ये एक हो। केवल कागजको फूल बनाउनको लागी तपाईलाई अलि बढी धैर्यता हुनुपर्छ तर ती तुरुन्तै प्राप्त हुन्छन्। पोस्ट मा फूल, ढु stones्गा र मैनबत्तीको साथ केन्द्रबिन्दु तपाईंले तस्बिरहरू सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया देख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंले विवरण गुमाउनुहुन्न।
यदि तपाइँ ढु stone्गा शिल्प र बोर्ड खेलहरू मन पराउनुहुन्छ भने, यसमा कुनै शंका छैन देहाती डोमिनोज तपाईं राम्रो समय बिताउन जाँदै हुनुहुन्छ। पहिले यसलाई बनाउनुहोस् र त्यसपछि खेल्नुहोस्! सुपर सजिलो हुनुको अतिरिक्त, तपाईंले सामग्रीहरू पुन: प्रयोग गर्नुहुनेछ।
यो डोमिनो बनाउनको लागि तपाईंलाई समुद्री ढुङ्गाहरू चाहिन्छ, यद्यपि यदि तपाईंसँग यो नजिकै छैन भने तपाईंले समतल सतह भएको कुनै पनि ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीहरू सेतो र कालो रंग, ब्रश र अखबारको पाना हुन् ताकि दाग नहोस्।
यो डोमिनो बनाउने प्रक्रियामा धेरै रहस्य छैन तर यदि तपाइँ यो कसरी गरिन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई पोस्टमा एक नजर राख्न सिफारिस गर्दछु। DIY: ढु stones्गाको साथ डोमिनोज.
सजिएको समुद्र तट ढु stones्गा
यदि तपाईंसँग अघिल्लो शिल्पबाट केही ढुङ्गाहरू बाँकी छन् भने, तिनीहरूलाई बचत गर्नुहोस् किनभने तिनीहरू बच्चाहरूसँग अर्को शिल्प गर्न लायक हुनेछन् र त्यो आकारमा सजाउनु हो। ladybugs वा कीरा ढुङ्गा। तिनीहरूले रंगहरूसँग ढुङ्गाहरू चित्रण गर्न राम्रो समय पाउनेछन्! साथै, यसले तिनीहरूलाई आफ्नो सबै रचनात्मकता विकास गर्न अनुमति दिनेछ।
यी सजाइएको समुद्र तट ढुङ्गाहरू प्राप्त गर्न तपाईलाई के चीजहरू चाहिन्छ? ढुङ्गाहरू, निस्सन्देह, रंगीन पेन्टहरू, ब्रश, वार्निश र अखबारको पाना दाग नहोस्। र तिनीहरू कसरी बनाइएका छन् हेर्नको लागि, पोस्ट नछुटाउनुहोस् सजिएको समुद्र तट ढु stones्गा.
रंग संग सजावट ढु stones्गा
पेन्ट संग ढुङ्गाहरु को सजावट को अर्को तरीका यी हुन् प्यारा सानो martians। डोमिनोज वा लेडीबगहरू जस्ता हामीले पहिले कुरा गरेका ढु stone्गा शिल्पहरूसँग सँगै गर्न यो उत्तम छ।
तपाईंले यी एलियनहरू पुन: सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू व्यावहारिक रूपमा समान छन्: समतल सतहहरू, टाँसिएको आँखा, टेम्पेरा वा एक्रिलिक रंग र राम्रो स्थायी मार्करहरू सहित विभिन्न आकारका ढुङ्गाहरू। के तपाईं तिनीहरू कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ? पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस् रंग संग सजावट ढु stones्गा। छिटो, सजिलो र धेरै रमाइलो!
कसरी तपाइँको ढु stones्गा र सजाउने
निम्न साना केटाकेटीहरूको लागि ढुङ्गाहरू सहितको अर्को शिल्प हो जसको साथ तिनीहरूले रमाइलो गर्न सक्छन् र राम्रो समय चित्रकारी गर्न सक्छन्। मार्टियनहरूको अनुहार भएको ढुङ्गाहरू। अघिल्लो डिजाइनको विपरीत, यसमा गाढा रङहरू र फरक फिनिशहरू छन्। उनीहरुको पनि कपाल छ !
तपाईंले यी ढुङ्गाहरू रंगाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हुन्: ईभा फोम, ऊन, रंगीन पेन्ट, ग्लिटर, सिलिकन, ढुङ्गा, सजावटी आँखा र सजावट पूरा गर्न अन्य सामग्री। पोस्ट मा कसरी तपाइँको ढु stones्गा र सजाउने तपाईं सबै चरणहरू र यो कसरी गरिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ।
पेन्ट पत्थर सजावट गर्न
ढुङ्गाहरु संग तपाईं पनि सजावट गर्न सक्नुहुन्छ पारदर्शी फूलदानहरू र हल वा घरको बैठक कोठाको सजावटको लागि धेरै राम्रो प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस्। यो शिल्प धेरै सजिलो छ र तपाईले मनपर्ने ढुङ्गाहरू सजाउन सक्नुहुन्छ: ज्यामितीय, पुष्प, समुद्री आकृतिहरू ... परिणाम सबैभन्दा सुन्दर छ।
तपाईले जम्मा गर्नु पर्ने सामग्रीहरू लेख्नुहोस्: नदी वा समुद्र तटको ढुङ्गा, स्थायी मार्कर, एक्रिलिक रंग, ब्रश र फिक्सेटिभ इनामेल (वैकल्पिक)। पोस्ट नछुटाउनु होला पेन्ट पत्थर सजावट गर्न यो कसरी गर्ने भनेर सिक्न।
रूखको लागि ढुङ्गाको घेरा
यो सूची बन्द गर्ने अन्तिम ढुङ्गाको शिल्प घरको बगैंचामा लागू गर्नको लागि उपयुक्त छ:aरूखहरू सजाउन ढुङ्गाहरूको घेरा जुन तपाईं बगैंचामा हुनुहुन्छ। यो शिल्प अरूहरू भन्दा अलि बढी जटिल छ, तर यदि तपाइँ बागवानी मनपर्छ भने, तपाइँ साँच्चै यसको आनन्द लिन जाँदै हुनुहुन्छ।
तपाईंले सङ्कलन गर्नुपर्ने सामग्रीहरूमा ध्यान दिनुहोस्: सिमेन्ट, पानी, बालुवा, ढुङ्गा, सिमेन्ट बनाउनको लागि बाल्टिन, पिक्सेस, ट्रोवेल, लेगन र ब्रश। यो कसरी गरिन्छ जान्नको लागि, पोस्टमा प्रक्रियाका सबै छविहरूका साथ चरणहरू नछुटाउनुहोस् रूखको लागि ढुङ्गाको घेरा.
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » रिसाइकिलिंग » 12 सजिलो र मूल ढुङ्गा संग शिल्प
ट्वाइलेट पेपर रोलहरूको कार्डबोर्डको फाइदा लिन शिल्पहरू
जनावरको आकारको जन्मदिनको झोला